Fahalalahàna miteny · Janoary, 2021 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Janoary, 2021
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Janoary, 2021
Azia Atsimo 22 Janoary 2021
Tamin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy, vehivavy, olona niova fananahana, ankizy ary lehilahy an'arivony maro no nandray anjara tamin'ny Diabe Aurat fanao isan-taona tany amin'ireo tanàndehibe Pakistaney samihafa mba hanasongadinana ny zava-tsarotra iainan'ny vehivavy.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 20 Janoary 2021
Rosiana iray mpanao gazety sy Kanadiàna artista mpanao hatsikana sy sarimiaina no niara-niasa hamorona rakibolana an-tserasera amin'ny teny rosiana-anglisy, mankalaza ny haren'ny fitenenana ratsy Rosiana ao amin'ny Instagram.
Oseania 08 Janoary 2021
"Aza miditra amin'ny fiainam-bahoaka sy mampihatra ny lalàna sy mandray fanapaha-kevitra hahasoa ny tenanao manokana na ho fiarovana anao manokana araka ny fahitana azy amin'ny fandraràna ny Facebook."
Amerika Avaratra 07 Janoary 2021
Nanambara fanovana lehibe tamin'ny politikan'i Etazonia sasany ny fitondran'i Obama, natao “hanoloran-tanana ny vahoaka Kiobana hanohanana ny fanirian'izy ireo hamaritra malalaka ny hoavin'ny fireneny.” Na dia nanala ny famerana tamin'ny fivezivezena sy ny fandefasana vola aza ny fiovan'ny politika ary nanokatra làlana ho an'ny fanatsarana ny fifandraisan-davitra bebe kokoa tao amin'ny nosy dia misy ny bilaogera sasany manahy fa tsy lasa lavitra loatra io fepetra io....
Afrika Mainty 04 Janoary 2021
Volana maro taorian'ny nampiharana ny fanapahankevitra hanao fihibohana, tsy nasian'ny governemanta resaka ny fitakian'ny vahoaka momba ny fanampiana ara-tsakafo. Fotoana ve izao tokony hiverenany mandinika ny lasitra fitantanany?